I-China yenze idrafti yokupholisa iiTowers ezinombala oMvelisi kunye noMthengisi | Yubing
Ukusebenza ngokukuko ...
Uyilo olwenziweyo lokupholisa iTowers ngembonakalo yoxande
Iinqaba zokupholisa zesekethe ezivulekileyo zizixhobo ezisebenzisa umgaqo wendalo: ubuncinci bamanzi buthoba ubushushu ngomphunga onyanzelekileyo ukupholisa izixhobo ezifanelekileyo.
Amanzi afudumeleyo avela kumthombo wobushushu ampontshwa kwinkqubo yokuhambisa amanzi phezulu kwinqaba ngemibhobho. La manzi ahlulelwe kwaye asasazwa ngaphezulu kwendawo emanzi yokugcwalisa ngemipu esemgangathweni yokuhambisa amanzi. Kwangelo xesha, umoya utsalwa ungene ngaphakathi kwi-louvers yomoya emazantsi enqaba kwaye uhambe uye phezulu kwindawo emanzi yokugcwalisa ejongene nokuhamba kwamanzi. Isahlulo esincinci samanzi senziwe ngumphunga osusa ubushushu emanzini aseleyo. Umoya ofudumeleyo ofumileyo utsaliwe ngaphezulu kwenqaba yokupholisa yifeni kwaye ukhutshelwe emoyeni. Amanzi apholileyo ahambisa isitya esisezantsi kwinqaba kwaye abuyiselwe kumthombo wobushushu. Olu luyilo (ukukhutshwa komoya nkqo) kuthathela ingqalelo umoya oshushu ukuya phezulu kwaye kukho umgama othile phakathi kokungeniswa komoya omtsha kunye neendawo ezifudumeleyo zomoya ofumileyo ukunciphisa ithuba lokuphindaphindwa komoya.
Izinto eziluncedo zeSekethe evulekileyo yokupholisa iNqaba:
Ukusetyenziswa kwaMandla okuCuthisiweyo (Yeyona nqaba ipholileyo yokusebenza kolu shishino)
Impembelelo yokusiNgqongileyo ephantsi (Isandi esisebenza kancinci kunye neefeni ezifanelekileyo zepremiyamu)
Ukuhlala kunye nokukhanya kobunzima bokuFakelwa okulula kunye nokuGcinwa.
Ulwakhiwo oluPhakamileyo lokuhlangabezana neemfuno zomoya kunye neenyikima.
Ukhetho lweFlexible kumacandelo aphambili kwiiprojekthi ezenziwe ngokukodwa.
I-ICE iinqaba ezipholileyo ezisemgangathweni zisebenzisa iphepha lakutshanje elinganyangekiyo ukubola.
Isinyithi (izinto ezifanayo njengendawo ebiyelweyo) isitya esigqityiweyo kunye nomgangatho osezantsi wethambeka ukunqanda ukuma kwamanzi. Kwaye inendawo yokudibanisa amanzi kunye nesihluzi se-anti-vortex, ukuphuma kwegazi kunye nokunxibelelana okuphuphumayo, uqhagamshelo lwamanzi lokuzalisa olupheleleyo kunye nevalve yokuhamba, umbhobho womoya owomeleleyo wePVC kunye nombhobho wegazi.
Idikki emanzi Gcwalisa / Tshintsha umzimba
I-ICE uxande oluvulekileyo lokupholisa inqaba ixhotyiswe nge-herringbone evapitsa ipakethe yokugcwalisa eyenziwe ngeefilili ze-PVC ezidityaniswe kunye kwaye zimiliswe ngokufanelekileyo ukwandisa isiphithiphithi samanzi ukunyusa ukusebenza kotshintshiselwano ngobushushu.
I-ICE evulekileyo yokupholisa iziphaluka ezifakwe kunye nabalandeli be-axial yesizukulwane samva nje, kunye nokuhambisa okungalinganiyo kunye neebhleja ezinokuhlengahlengiswa ngeprofayili ephezulu yokusebenza. Iifans zengxolo ezisezantsi ziyafumaneka kwimfuno.
Egqithileyo Uhlobo lwebhotile ejikelezileyo Ukuphikisana nokuhamba kokupholisa iiTowers
Okulandelayo: Ukuhamba komnqamlezo okuValiweyo kweSekethe yokupholisa iiTowers / iiVolor evaliweyo zesekethe
Zu okupholisa tower
Inqaba yokupholisa uyilo
yokupholisa tower tower
ivule inqaba yokupholisa
uhlobo oluvulekileyo lokupholisa inqaba
Okoxande uhlobo olupholileyo lokupholisa inqaba
amanzi-apholileyo inqaba yokupholisa
Uyilo olwenziweyo lokuhamba kweTower ye-Power Gener ...
Uhlobo lwebhotile ejikelezileyo Ukuphikisana nokuhamba kokupholisa iiTowers
Ukuhamba komnqamlezo kuvaliwe iiSchooling Towers / Evap ...
Ukuhamba-ngokuhamba kweSekethe yokuVala iiTowers / Ev ...